မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း - ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက မူမမှန်ပါသလဲ? - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း – ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက မူမမှန်ပါသလဲ?
ဇွန် 20, 2018 Surached Apininbongkode, M.D.
အဖြူဆင်းသည့်အချိန်မှာ ပျစ်နေပြီးတော့ နွားနို့ပုပ်နံ့ရနေမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီမှာ ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရနံ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အဖြူဆင်းခြင်းကို အနံ့တစ်ခုထဲနဲ့ ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားဖို့ ခက်ခဲလှပါတယ်။
အဆီချခြင်း နှင့် တချို့ ပဋိဇီ၀ဆေးများကလည်း ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
“ မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခံတွင်းက သွားရည်လိုမျိုးပဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ မိန်းမကိုယ်မှာလည်း ပုံမှန်အဖြူဆင်းတဲ့ ပမာဏတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ပိုင် ထူးခြားတဲ့ အနံ့တစ်ခုရှိပါတယ် – ဒါက သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြုဆင်းခြင်း (သို့) Leucorrhea ဆိုတာက အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်မှ အဖြူရောင်အရည်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ယခုလိုဖြစ်ခြင်းက စိုးရိမ်စရာမဟုတ်သလို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ အခုလိုမျိုး မွေးလမ်းကြောင်းမှအဖြူဆင်းနေခြင်းကို ရှက်ကြောက်ကြီးစွာဖြင့် ဆရာဝန်ဆီကို သွားမပြတဲ့ အမျိုးသမီးများ အများအပြားရှိလို့နေပါတယ်။
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း – ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါသလဲ?
ပုံမှန်မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းတဲ့ ပမာဏဟာ လူတစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ကွဲပြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ယခင် ပုံမှန်အခြေအနေမှာ အဖြူဆင်းတဲ့ ပမာဏ၊ ဓမ္မတာလာနေတဲ့အချိန်အတွင်း နဲ့ ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်တွေမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီနေရာမှာ ပုံမှန်ခံစားနေရခြင်းနဲ့ သိသာတဲ့ ကွာခြားမှုရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အဖြူဆင်းခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သံသယရှိသင့်ပါပြီ။
အဖြူဆင်းတဲ့ ပုံစံကိုက်ညီမှု – အကယ်၍ ဒီလိုပြောင်းလဲနေခဲ့ရင် ဆရာဝန်ထံ ပြသဖို့ လိုအပ်မှာပါ။ ပုံမှန် မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းက လ၊ အချိန်နဲ့ ဓမ္မတာအပေါ်မူတည်ပြီး အဖြူဆင်းခြင်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့်
အရောင်ကြည်ကြည် သို့မဟုတ် ချွဲပြစ်ပြစ်လိုမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာမတိုင်ခင်နဲ့ ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ်ပျစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ပုံမှန်ထက် သိသိသာသာပိုပြီး ပျစ်နေတယ်၊ စိုထိုင်းသော ပေါင်ဒါမှုန့် (သို့) နွားနို့အပျစ်နဲ့ တူနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါက မှိုစွဲတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကြည် ခြင်း (သို့) အလင်းပိတ်နေခြင်းမျိုး လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပီး တခါတလေမှာ အနည်းငယ်ဝါနေတတ် ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြူဝါဝါ အရောင်မျိုး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အရောင်ဟာ ဝါစိမ်းရောင်ကို ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒါက ပုံမှန်အနေအထားမဟုတ်တော့ပါဘူး။
အဝါရောင်ဆင်းခြင်းဟာ မွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှာ ကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Trichomoniasis ရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုလိုမျိုး အရည်ဆင်းခြင်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အဝါရောင်ဖြစ်နေတတ်ပြီးတော့ အရမ်းမပျစ်နေခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ အနံ့ဆိုးတွေပါ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ယခုဖြစ်ရပ်တွေဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်း ပြင်ပအရာဝတ္ထုများဖြစ်တဲ့ Tampons (သို့) Sex Toys များ ထည့်သွင်းခြင်းတို့ကနေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ယခုလက္ခဏာဟာ အများအားဖြင့် မှိုကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်ဆင်းခြင်းက ချွဲပစ်နေတတ်ပြီး တခါတရံမှာ နွားနို့ပုပ်လိုမျိုး အနံ့ထွက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုက်ခဲမှု (သို့) လောင်ကျွမ်းတဲ့ ခံစားမှုကိုလည်း အထူးသဖြင့် ဆီးသွားနေတဲ့အချိန်အတောအတွင်းမှာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဟာ မိန်းမကိုယ်အတွင်းမှာ ယားယံမှုနဲ့ ပေါင်ခြံနေရာမျိုးမှာ ပြင်းထန်တဲ့အနီစက်များ လောင်ကျွမ်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုမျိုး အရည်ဆင်းခြင်းဟာ တခါတရံမှာ Antibiotics သောက်သုံးနေခြင်း (သို့) ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့လူနာတွေမှာတွေ့ရှိရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ခံအားကို လျော့ချပေးတဲ့ဆေးကို သောက်သုံးနေတဲ့လူနာနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရှိတဲ့လူနာ အစရှိတဲ့လူနာတွေမှာ တွေ့ရှိရနိုင်ပါတယ်။
ယခုလက္ခဏာကတော့ မိန်းမကိုယ်ထဲကို ပြင်ပအရာဝတ္ထုတွေ ထိုးသွင်းခြင်းကြောင့် (သို့) ဂနိုရောဂါဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ဦးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုခြင်းတို့မှ ဖြစ်ပွားလာတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စရပ်မှာတော့ မွေးလမ်းကြောင်းမှဆင်းတဲ့အရည်ဟာ အစိမ်းရောင် (သို့) အဝါကျင့်ကျင့်အစိမ်းရောင် ရှိမှာဖြစ်ပြီး ငါးညှီနံ့လိုမျိုး အနံ့ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူနာဟာ ဆီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုက်ခဲခြင်း (သို့) ဆီးပူခြင်း လက္ခဏာများ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာရပ်ကတော့ သူအိမ်လမ်းကြောင်းမှ မလိုအပ်တော့တဲ့ သေဆုံးပြီးသွေးဆဲလ်များ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ကွာကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် မိန်းမဓမ္မတာရာသီပြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ တခါတရံ ရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာ ကြွေမကျသွားတဲ့ သားအိမ်လမ်းကြောင်းနံရံမှာ အကြွင်းအကျန်တွေဟာ ကျန်နေတတ်ပြီး ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှ အချိန်အတိအကျ မထွက်သွားတာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး သွေးဟောင်းများ ကိုယ်ကနေ ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန်မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းပါက အဖြူရောင်မှ ညိုရောင်ဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်။ အညိုရောင်ဆင်းခြင်းဆိုတာက သားအိမ်ဆွဲဆန့်မှု ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ယခုအရည်ဆင်းခြင်းဟာ ပျစ်နေပြီးတော့ အမြှုတ်ထသလိုဖြစ်ခြင်း အနံ့ဆိုးရှိနေမယ်၊ ခြင်း ဆီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်း ဆီးပူခြင်း ယားယံခြင်း ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းမှအဖြူဆင်းခြင်းလို့ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ကနေတစ်ဆင့် ပေါင်ခြံနေရာမှာ နီနေပြီး ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ယခုလိုမျိုး လက္ခဏာများ ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီမှာ ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အနံ့အသက်ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက် မိန်းမတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်တွင်းအနံ့အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ အဖြူဆင်းခြင်းဟာ ပုံမှန်ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကို ပြောပြဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းက အနံ့ဆိုးထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စရပ်ဟာ လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် နဲ့ လိင်ဆက်ဆံပြီးပြီးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် ယခုအရည်ဆင်းခြင်းက မိန်းမကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယား (သို့) ကပ်ပါးပိုးကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ အငန်ဓါတ်ဟာ သုတ်ပိုးနဲ့ ထိတွေ့ပြီး လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့အချိန်မှာ ငါးညှီနံ့လိုမျိုး အနံ့က ပိုပြီး သိသာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ကန်ပြီး တိကျတဲ့ကုသမှုကို ခံယူဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောဖို့ မရှက်ကြောက်သင့်ပဲ ဆရာဝန်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အနံ့မနံသော အဖြူဆင်းခြင်း
ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မွေးလမ်းကြောင်းမှအဖြူဆင်းခြင်းတွေက အမြဲတမ်း အနံဆိုးရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ မှိုကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းအဖြူဆင်းခြင်းဟာ တခါတရံမှာ အနံ့ကင်းမဲ့တတ်ပါတယ်။ သို့သော် ပမာဏအများအပြားဆင်းတတ်သလို ချွဲပျစ်နေပြီး အဖြူရောင်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Cottage ဒိန်ခဲပုံစံ ရှိနေပြီးတော့ နို့မိုင်လိုမျိုး အမျိုးသမီးအတွင်းခံဘောင်းဘီမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကိုက်ခဲမှုလည်း ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တခါတလေမှာ စိုထိုင်းနေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကို ဝတ်တာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပြီးတော့ အခုလိုဖြစ်ရခြင်းကို ရှောင်လွှဲဖို့အတွက် နေရောင်အောက်မှာပဲ လှမ်းထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အရိပ်ထဲမှာမှိုကူးစက်တတ်တဲ့အတွက် နေအရိပ်မှာ မလှမ်းထားသင့်ပါဘူး။ ဒါတောင်မှ ခြောက်သွေ့နေတဲ့အတွင်းခံဟာ မှိုကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသေးတယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကို ထိုင်းမှိုင်း စိုထိုင်းအောင်ထားခြင်း (သို့) တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ စိုထိုင်းစေခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒါက မိန်းမကိုယ်ကို မှိုကူးစက်စေနိုင်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းအဖြူဆင်းမှုတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ် ။
မှိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အဖြူဆင်းမှုတွေက အဆီချမှု နဲ့ ဆေးသောက်သုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်
ကစော်ဖောက်ထားတဲ့ အစားအစာတွေစားသုံးတတ်တဲ့ အချို့အမျိုးသမီးတွေက မိူကူးစက်မှုတွေကို ဖြစ်ပွားနိုင် သလို အခြားသူတွေအတွက်ကတော့ ပင်လယ်စာ စားသုံးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့ ပဋိဇီ၀ ပိုးသတ်ဆေးတွေကို အသုံးပြုတာကလည်း မိူကူးစက်မှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ မိန်းမကိုယ်ကိုကုတ်ခြစ်မှုတွေ၊ အနာတွေကတဆင့် မွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်မှုတွေ ကြောင့်အတိအကျမရှိတဲ့ အနံ့တစ်ခုနဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းအဖြူဆင်းတာကိုဖြစ်စေပါတယ်။
နောက်တချက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ယခုကိစ္စရပ်မှာတော့ မွေးလမ်းကြောင်းအဖြူဆင်းခြင်းက ပိုများလာမှာဖြစ်ပြီး ကြည်လင်နေသလို အနံ့လည်းမရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုလိုအချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေက မှိုကူးစက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများလာပြီးတော့ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရှိနေတဲ့မိခင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂနိုရောဂါရှိနေတဲ့သူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းအဖြူဆင်းခြင်းကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ချွဲပျစ်နေတတ်ပြီး ပုံမှန်ထက် သိသိသာသာပိုများတဲ့ပမာဏရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အနံ့ဆိုးနည်းနည်းပါးပါးသာ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်က စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာ Culture Test (ပိုးမွေး စစ်ဆေးခြင်း) ကိုပါ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မွေးလမ်းကြောင်းအဖြူဆင်းခြင်းဟာ ရှက်ကြောက်နေစရာမလိုအပ်တော့သလို စိတ်ညစ်ညူးစရာလဲ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဂရုစိုက်ဖို့သာ လိုအပ်ပြီးအထူးသဖြင့် မှိုကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ ပိုပြီးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ သင့်ရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ဟာ သန့်ရှင်းတဲ့ရေနဲ့ ဆေးကြောပြီး ခြောက်သွေ့အောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာအချိန်မှာလည်း လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို မကြာခဏလဲလှယ်ပေးပြီး ကျပ်တဲ့အတွင်းခံတွေကို ဝတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီများကို စိုထိုင်းအောင်မထားပဲနဲ့ အတွင်းခံကို သန့်ရှင်းနေအောင် လျှော်ဖွတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လျှော်ဖွတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း နေရောင်အောက်မှာပဲ ခြောက်သွေ့အောင်လှမ်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။”
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း - ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးက မူမမှန်ပါသလဲ? "မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခံတွင်းက သွားရည်လိုမျိုးပဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ မိန်းမကိုယ်မှာ
User rating: 2.85 out of5with 40 ratings